निमुखाहरूको गीत–फापारे। – Molamkhabar
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार १७:५३
सबाल्टर्न (Subaltern) भन्ने एउटा शब्द छ । यसबारे दसकौंदेखि विश्वका कहलिएका विद्वानहरूले चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछन्। लेख–रचना, पुस्तक प्रकाशित गर्दछन् र पिएचडी नै पनि गर्दछन्। यसबारे नेपालका विद्वानहरू मात्र होइन तामाङ विद्वानहरू पनि प्रवक्ता सो सरहनै छन्( बोल्ने, लेख्ने गर्दछन् र वहसमा भाग लिन्छन्। तर तामाङ जातिका विद्वानहरूले सबाल्टर्न पक्षको बारेमा फिटिक्कै बोलेको वा लेखेको सुनेको छैन। हाम्रा विद्वानहरू ठुलाठुला अन्तर्रा्ष्टिय विषयमा चासो राख्छन्। राष्ट्रिय विषयसम्म आइपुग्छन् तर स्थानीय विषयलाई छुदैनन्। भनौं हेय ठान्छन्। यस्तालाई स्थानीय भाषामा ‘नकचरो’ भनिन्छ क्यारै?
सबाल्टर्न बुझाउन नेपालीमा ‘निमुखा’ शब्दको प्रयोग हुन्छ। उनीहरू आफ्ना दुख–पिडालाई सडकमा-नारा जुलुस गरेर वा पत्रपत्रिकामा लेखेर, पोख्न सक्दैनन् भन्ने छ। यसैले यिनलाई आवाजविहिनहरू पनि भन्ने गर्दछन् । आवाज नभएकाहरू (आवाजविहिनको कुरा गरेर ठुलाठुला आवाजवालाहरूले नाजाज फाइदा उठाउने गर्दछन्( संसदसम्म पुगेका छन् र प्रधानमन्त्रीसम्म पनि भएका छन्)।
तामाङ भाषामा गाइने हुनाले यसले तामाङ भाषाको संरक्षण र संवद्र्घन गरिरहेको छ । युगौंदेखि हालसम्मै चलिरहेको यसको शैली सरल र सम्प्रेषणीय छ। मस्तिष्कले होइन, मनले गाउँछन्। शब्दले मन छुन्छ। गायकहरूले श्रोताको चाहना बुझेर गीत सिर्जना गर्छन्।
गत हप्ता भच्युअल माध्यममा ‘तामाङ रैथाने फापारे गायन प्रतियोगिता’ प्रस्तुत गर्याे । एक हप्तासम्म चलेको प्रतियोगितामा १२ जोडीले आआफ्ना गायन प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा ४८ जनाको सहभागीता रह्यो। तामाङ समुदायमा गाइने ‘फापारे गीत’ रैथाने त हुँदै हो, यो अति लोकप्रिय पनि छ । यसमा कुनै प्रकारको बाजाको प्रयोग हुँदैन। स्वर र भावकै आधारमा श्रोतावर्गलाई आकर्षण गर्दछ । स्थानीय जात्रामा गाइन्छ। स्थानीयहरू रूचीपूर्वक सुन्दछन्। आफ्नो मनको कुरा गीतमा व्यक्त भएको ठान्द्छन्। यसर्थ यो पूर्णतः सामाजिक गीत हो। तामाङ समाजको सुखदुखको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसमा समाजको चालचलन, परम्परा, रीतिरिवाज, विकृति, दावपेच, घोचपेच, स्थिति र परिवेश आदिको अभिव्यक्त हुन्छ। तामाङ समाजलाई अभिव्यक्त गर्ने अर्को कुनै गीत छैन। यस्तो गीत प्रायः निराक्षरहरूले गाउँछन्। पढेलेखेकाहरू यसलाई ‘गवार’ (गाउँघरमा असभ्य) ठान्दछन् र गाउँदैनन्। गाउनै परे नेपाली शब्दमा उनेर ‘सेला’ भन्दै गाजाबाजासहित गाउने गर्दछन् । रवाफिलो ढंगले, सभ्य त्यही ठान्छन् । सप्ताहाव्यापी फापारे गायनमा यिनीहरू देखिएनन् पनि। विद्वान भन्नेहरूले पनि यसबारे एक शब्द कतै लेखेनन्। उनीहरूलाई के लाग्दो हो भने यसबारे लेखेमा उनीहरूका ज्ञान नै अछुत भइहाल्छ।
वास्तवमा यो सबाल्टर्न गीत हो। निमुखाहरूको गीत–फापारे। शिक्षित वर्गले नगाउने, नसुन्ने र चासो नदिने। वास्तवमा फापारे गायनले नै तामाङ समाजलाई गति दिइरहेको छ। तामाङ भाषामा गाइने हुनाले यसले तामाङ भाषाको संरक्षण र संवद्र्घन गरिरहेको छ । युगौंदेखि हालसम्मै चलिरहेको यसको शैली सरल र सम्प्रेषणीय छ। मस्तिष्कले होइन, मनले गाउँछन्। शब्दले मन छुन्छ। गायकहरूले श्रोताको चाहना बुझेर गीत सिर्जना गर्छन्। स्रोता तथा दर्शकहरूले कलाकारहरूलाई प्रत्यक्ष पाउँछन्। तुरुन्तै लाइक र कमेन्ट पनि गरिहाल्छन्– फेसबुकमा जस्तै। यसर्थ यसको क्रेज ओइलाएको छैन। हजारौं दर्शकले पनि यसको क्रेजलाई उजागार गरेको छ। फापारे कलाकारहरूले संस्था पनि खोलेका छन्।
मेरो विचारमा यस निमुखा गीत ‘फापारे’ले तामाङ भाषा मात्र होइन संस्कृति संस्कारलाई संरक्षण संवद्र्घन गरिरहेकोले यसलाई बचाउन सबै तह र तप्काका तामाङहरू जुटन आवश्यक छ । छलफल र अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाउन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पुर्याउने आवश्यक छ। जीवन्त सम्पदा (Living heritage) को रूपमा स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको संस्था युनेस्कोमा दर्ता गराउनेतिर पनि हाम्रो पहल हुन आवश्यक छ।
यसलाई हेय नसम्झौं। युवा पुस्ताका र शिक्षित पुस्ता पनि गायनतिर लागौं र नयाँनयाँ विषयवस्तु फापारेमा प्रवेश गराऔं। सबैको मन र मस्तिष्क पलाओस्। धन्यवाद !
झडपपछि बुल्दीखोला पुलकाे उद्घाटन ….
दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय आन्दोलन ….
दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय आन्दोलन ....